प्राथमिकता जहाजभन्दा पनि व्यवस्थापन सुधार्नु हो | गृहपृष्ठ
Home १० वर्ष अघि प्राथमिकता जहाजभन्दा पनि व्यवस्थापन सुधार्नु हो
on: २७ पुष २०७५, शुक्रबार ०५:३८ १० वर्ष अघि
प्राथमिकता जहाजभन्दा पनि व्यवस्थापन सुधार्नु हो
समस्याले ग्रस्त भएको र तत्काल केही नगरे डुबिहाल्छ भन्ने अवस्थामा निगम रहेकाले योजना नै नभई यहाँको नेतृत्व लिने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले मैले अल्पकालीन र दीर्घकालीन केही योजना बनाएको छु यसलाई आफ्नो तर्फबाट अन्तिम रूप दिएपछि बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अन्तिम रूप दिनेछु ।
मुख्य कुरा व्यवसपाानमा नै छ । त्यसैले मेरो कामको सुरुवात व्यवस्थापनबाटै हुन्छ । यहाँको आन्तरिक व्यवस्थापन लगालिङ्ग छ । बोर्ड त सोकेसमा सजाउने सामान अर्थात् सेरेमोनियल मात्र छ । खर्चसम्बन्धी कुनै पनि कुार बोर्डसँग नसोधी महाप्रबन्धक र व्यवनस्थापनले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ । त्यसे गर्दा आर्थिक अराजकता निकै बढेको छ । पेस्की लिएका कर्मचारीले अवकास पाउँदासमेत तिर्दैनन् र व्यवस्थापनले त्यो रमक असुलीका लागि पहल पनि नगरेको अवस्था छ ।
अहलिकै व्यवस्थापनलाई जस्ताको तस्तै राखेर त केही कुराको पनि आश गर्न सकिँदैन । जहाज किने पनि उही हालत हुन्छ । त्यसैले पहिलो कुरा नै व्यवस्थापन सुधार हो । त्यसको लागि एकातिर नयाँ पुस्तालाई प्रवेश गराउनुपर्छ भने अर्कातिर यसलाई कम्पनीमा परिणत गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्छ । अनि मात्र निगम सही ढंगले अगाडि बढ्न सक्छ । त्यसैले अहिले मेरो प्राथमिकता नयाँ जहाजभन्दा पनि व्यवस्थापन सुधार गर्नु हो ।
यति धेरै आयोग बनेका रहेछन् कि एक महिना हुन लाग्दा पनि तिनले दिएका रिपोर्टहरू पढेर भ्याएको छैन । आयोगमाथि आयोग, रिपोर्ट माथि रिपोर्ट । हुँदा हुँदा डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा त विगतमा बनेका आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदनको सारांश तयार गर्न नै छुट्टै आयोग गठन गरिएको रहेछ । तर त्यसले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन गरिएन । यस्तो अवस्था दोहोर्‍याउने काम मबाट हुँदैन ।
(नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष, डा. गोविन्दबहादुर थापा)
वर्ष ३, अंक २२, २०६४, माघ २१–२७